Siyaasi Caan ah oo Shaaciyay in uu ka haray Tartanka Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Siyaasi Caan ah oo Shaaciyay in uu ka haray Tartanka Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya!!
Siyaasi Caan ah oo Shaaciyay in uu ka haray Tartanka Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya!!
Jan 09, 2017WARAR
Siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo horey u sheegay in uu u tartamayo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa markan shaaciyay in uu ka tanaasulay in uu u tartamo Kursiga Madaxweynaha Soomaaliya.
Waxa uu sheegay Salaad Cali Jeelle in uu go’aansaday in uu tartanka ka haro kadib markii uu arkay Musuq maasuq baahsan uu sheegay in doorashada ka dhacday gaar ahaan qaabkii Xildhibaanada lagu soo doortay.
Salaad Cali Jeelle ayaa xusay in aysan suurto gal aheyn in uu ka qeyb galo doorashada Madaxweyne ee dhaceysa, waxa uuna cadeeyay in Doorashada ay hareeysay Musuq maasuq iyo wax isdaba marin sidaa darteedna uu isaga haray tartanka.
”Aniga kama cabsan in doorashada la iiga adkaado ee waxaana uga haray tartanka waad ogtihiin qaabka musuq maasuqa iyo laaluushka ay kusoo baxeen Xildhibaanada, marka koox Diimeedyo ayaa lacag badan ku bixiyay Xildhibaanada iyaga ayeyna dooranayaan” Ayuu yiri Salaad Cali Jelle.
Siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa horey isugu soo sharaxay Jagada Madaxweynaha Soomaaliya sanadii 2012-kii, waxaan xusid mudan in Salaad uusan xiligaasi hal cod xitaa uusan ka helin doorashadii uu ka qeyb galay.
Waxaa sidoo kale la filayaa dhawaan in Musharaxiin kale ay tartanka isaga haraan waayo? lacagaha la iska rabo ayaa aad ubadan iyo Xildhibaanada kala bar horey loo soo iibsaday codkooda, waxaana Musharaxiinta qaarkood ay ka cabaanaayaan siday usocoto doorashada Soomaaliya oo dhaafftay kusubusho.
Previous PostWasiir ka tirsan Koofur Galbeed oo sharci daro ku tilmaamay Musharaxnimada Shariif Sakiin!! Next PostMUUQAAL: Mooshinkii Xilka qaadista Madaxwayne C.kariin iyo Xiisad ka dhextaagan maamulka Galmudug!